သူကြီးမင်း—သို့—- (ရွာလုံးကျွတ် ဖောက်ဖတ်လို့ရတဲ့)ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » သူကြီးမင်း—သို့—- (ရွာလုံးကျွတ် ဖောက်ဖတ်လို့ရတဲ့)ပေးစာ	27
Posted by Thint Aye Yeik on Dec 11, 2015 in Critic, History, Marketing, My Dear Diary, News | 27 comments
ကျနော် သတိရခြင်း များစွာဖြင့် စာရေးလိုက်ပါသည်၊၊
သဂျီးမင်း ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း ဦးစွာ ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်၊၊
အို — စကားပြေနဲ့ ရေးရတာ ရှုပ်ပါတယ်၊
စကားပြောနဲ့ပဲ ချမယ်၊၊ ကိုင်းးးး
ကျနော် နေတဲ့ မြေနီကုန်းလမ်းဆုံနားမှာ—
ဒီနေ့ ထူးဆန်းတာလေး တွေ့ခဲ့သဗျ—
ဘာတုန်း ဆိုတော့— ကောင်မလေးချောချော လှလှလေးတွေဗျ—
www.azmtv.com မှာ သတင်းကြေငြာတဲ့ အစ်မကြီးထက် အဆတစ်ရာ ပိုလှသဗျာ ကိုင်းးးး မှတ်ကရော—
-အိုက်လို အချောအလှ ကောင်မလေးတွေ -တွေ့တာ ဆန်းသလားးးလို့ မေးမလို့လား—
ဆန်းတာက ဘာတုန်းဆိုတော့ အဲ့ အချောအလှမမလေးတွေက လက်ထဲ ဂျာနယ်တွေ တပွေ့တပိုက်ကြီး ကိုင်းပြီး—
ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လူတွေ ကားတွေကို ဂျာနယ်တွေ ဝေပေးနေတာာာာဗျ—
Free ဆိုတာနဲ့ စိတ်ဝင်စားပြီး တိုးဝှေ့ ယူချင်တတ်တဲ့ နိုင်ငံကိုးးးးး
လူစည်ကားရာ လမ်းဆုံလမ်းခွမှာ ဂျာနယ်အသစ်တွေ အလကားဝေနေတော့—
ဟိုကလည်း ပေးပါအုန်း ဒီကလည်းပေးပါအုန်းနဲ့—ဝက်ဝက်ကွဲနေကြပါကရောလားဗျို့—
လူငယ်တွေကြား ရွှေပန်းစားနေတဲ့(အဲလေ)ရေပန်းစားနေတဲ့သူတွေအကြောင်းတောင် ပါသေး
ဂျာနယ်ကစာရွက်သားလည်း အကောင်းစား သပ်သပ်ရပ်ရပ်
-ဗေဒင်တို့ ကိုရီးယားစကားပြောနည်းတို့တောင် ပါသေး—
အ်ိုက်မြင်ကွင်းကို ကြည့်ပြီး ကျနော်က …ဘာ တွေးမိသွားလဲဆိုတော့—
ကျနော်တို့ရန်ကုန်မှာ အခြေစိုက်ပြီး အလကားထုတ်ဝေ ကြည့်ရင် ဖြစ်မှာပဲ လို့ တွက်မိတာဗျ—
ထုတ်ဖြစ်ဖို့အပိုင်းသာ သဂျီး တာဝန်ယူ—
(မတွေးတတ် တွေးတတ်နဲ့ တွေးမိတာကတော့… ထုတ်ဖြစ်ဖို့အပိုင်းထဲ ကြော်ငြာနဲ့ ရပ်တည်လို့ရမယ်ထင့်၊၊
အခု အလကားဝေတဲ့ METER ဂျာနယ်ထဲမလည်း ကြော်ငြာတွေမှ အများးးကြီး၊
စာမျက်နှာ 30 ကျော် ပါတာမှာ… ၁၅ မျက်နှာလောက်တော့ ကြော်ငြာတွေ ထည့်ထားသဗျ… )
ဆိုတော့ ဖြန့်ဝေရေးအပိုင်းကျတော့လည်း လူတွေ စိတ်ဝင်တစား ယူကြဖတ်ကြအောင် တစ်လ တစ်ခါ ရန်ကုန်က(ရွာသူား အချောအလှတွေ စုပြီး ရော့ဟေ့ ငါတို့ရွာ သတင်းစာကွ ဘာညာဆိုပြီး) တစ်မနက်လောက် ဝေလိုက်တာနဲ့ စောင်ရေ တစ်သောင်းပြိုက်ခနဲတောင် အသံမြည်သွားအုန်းမယ်—
(အဲ့လို လူအားနဲ့ မဝေနိုင်လည်း—
ကုန်တိုက်တွေ စတိုးဆိုင်ကြီးတွေဆီမှာ စင်လေး တန်းလေး တစ်နေရာစာ ချခွင့် ယူပြီး
အလကား ယူနိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့ စာတန်းချိတ် ထားကြည့်၊ မကုန်ရင် ကြိုက်သလိုပြော—)
အခြေအနေ ကောင်းမယ့်ပုံမို့ ဆေးထိုးကြည့်တာပါ၊၊
အဲ့လိုသာ လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းနေသူတွေလည်း သဂျီးရဲ့ တစ်လတစ်ခါထုတ် သတင်းစာကို PDF နဲ့ ဖတ်ရဖို့ အင်မတန်နှေးကွေးလှတဲ့ နက်လိုင်းနဲ့ ဒေါင်းနေစရာ မလိုတော့ပဲ စာရွက်ကိုင်ဖတ်ခွင့် ရချေတော့တမုံ့ပေါ့—
Wow says: အဲ့လို အလဂါးဝေတဲ့ဂျာနယ်တွေ ၂ စောင် ၃စောင်ရှိတယ်… ဟိုတစ်လောက ကားတွေအကြောင်းရေးတဲ့ ဂျာနယ်တစ်ခုလဲ အဲ့လိုပဲ
Alinsett @ Maung Thura says:2စောင်3စောင်တောင် ရှိတယ်လား…
ကျနော်က အခုမှ တစ်စောင် စတွေ့မိလို့… ဒီဂျာနယ်ကတော့… ပုံတွေ ဘာတွေနဲ့ စာရွက်သားလည်းကောင်းကောင်း ထုတ်ဝေထားတော့… လိုချင်သူ များသဗျ…
အလကားဝေတယ်ဆိုပေမယ့်..ပြီးစလွယ် လုပ်မထားတော့…မျက်စေ့ကျစရာလေးပေါ့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: သတင်းစာပေါ့။ ဂျာနယ်ပေါ့။ သတင်းစာဆို တစ်စောင် ၂၀၀ လပေးယူရင်ပိုတန်။ အလကားဝေတယ်ဆိုတာ ကြော်ငြာပေါ့ သူတို့က သူတို့ဆီကို ထည့်တဲ့ ကြော်ငြာနဲ့အသက်ဆက်ရတာ
ကြော်ငြာသာရမယ်ဆို အလကားတောင် ဝေနိုင်သဗျ။
Alinsett @ Maung Thura says: .သူကြီး သတင်းစာကတော့…. ကြော်ငြာအတွက် သိပ်တောင် ပူစရာမလိုဘူးထင့်…
အီးမြောက်မြောက် says: အေး.. ဟုတ်သကွ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Alinsett @ Maung Thura says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မက်ဆင်ဂျာ အစက ဝန်ထမ်းတွေဝေခိုင်းတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: မက်စင်ဂျာက အစကတော့ အလကားတဲ့…
တကယ့်တကယ် အလကားဆိုရင်…အဲ့လို ရောင်းတာကို… ခွင့်မပြုသင့်ဘူးပေါ့နော်…
.ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ပြီးစလွယ်….ပါးပါးလှပ်လှပ်လေး ထုတ်နေလို့….
မြစပဲရိုး says: အေဂျီအာအီးအီး :-)))
Alinsett @ Maung Thura says: အရီးကတော့ သဘောတူပြီ…
သဂျီး သဘောတူဖို့ပဲ လိုတော့တယ်…
kai says: …. လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ပါတ်ကပဲ.. ရန်ကုန်ကလူတယောက်.. အယ်လ်အေလယ်လယ်လာတုံး.. အဲဒီကိစ္စ ပြောဖြစ်တယ်..။
သူက.. အကုန်အိပ်စိုက်.. အခမဲ့ထုတ်မယ်ပြောတာပဲ..။ ဈေးတောင်တွက်ပေးလိုက်သေး..။
အလင်းဆက်နဲ့က.. စိတ်များ အဆက်အစပ်ရသွားသလားလို့……။
မြစပဲရိုး says: သူငယ်ချင်း စီးပွါးရေးသမား တွေကိုလဲ တို့ ပေးကြည့်ပါမယ်။ :-)))
alinsett says: သဂျီး သတင်းစာ သာ ရန်ကုန်မှာ လာထုတ်ရင်—
ရန်ကုန်က မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်ကိုတောင် ယှဉ်နိုင် ကျော်နိုင်မယ်ထင့်—
အခမဲ့ မဝေနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တောင် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ အခုလက်ရှိအရည်အသွေးနဲ့သာ ချအုန်း—
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီ အကြံ လိုက်လုပ်လို့ တဂျီးး မွဲ သွားးမယ် ဆို
I Totally/ Definitely/ Absolutely/ Fully AGREE.
alinsett says: သဂျီးကို အရောက်ပို့လိုက်ကြစို့—
Shwe Ei says: စားပွဲခင်းလုပ်လို့ရော ရလား ???
alinsett says: ဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းကို ခုထိုင်ပစ်လိုက်တယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 64
flamingo says: ကောင်းတယ်ဒီအစီအစဉ်…ခုတလောလူဟောင်းတွေတော်တော်များများပြန်ဝင်လာတာတွေ့တယ်။ဝမ်းသာစရာပါ။ဖရဲသီးနဲ့ရွေတိုက်စိုးဘဲကျန်နေတယ်။
မြစပဲရိုး says: မြန်မာတိုင်း ဆိုလို့ ပါ။ ဒါ နမူနာ တစ်ခု ပေါ့။ ဖတ်ကြည့်လေ။ ဘာမြင်လဲ။ :-))))))
အိုင်တီကဏ္ဍငယ်တစ်ခုမှ ယနေ့ မိုဘိုင်းခေတ်ဆီသို့
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဦးတင်ဝင်းအောင်ရဲ့ အသက် ၂၇ နှစ်မှာ ပထမဆုံး အိုင်ဘီအမ် ကွန်ပျူတာ ကြီး (မိန်းဖရိန်ကွန်ပျူတာ) ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ ဌာနကို ရောက်လာခဲ့တယ်။
kai says: ပြန်ချက်ကတော့ ပျံနေတာပဲ
မြစပဲရိုး says: (၁) ဦးတင်ဝင်းအောင် သည် အသက် ၉၇ ရှိသော အဖိုးကြီး မဟုတ်ပါ။ (စာဖတ်သူ တွေ ကို “၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဦးတင်ဝင်းအောင်ရဲ့ အသက် ၂၇ နှစ်မှာ” ဆိုပြီး စေတနာ နဲ့ အသက်တောင် တွက်ပေးလိုက်သေး lol:-)))
(၂) Mainframe computer တွေ က ကမ္ဘာ မှာတောင် ၁၉၅၀ နှောင်းပိုင်းလောက်မှ အစပျိုးလာတာမို့ ၁၉၄၇ မှာ မြန်မာပြည် မှာ ဘယ်လိုမှ မရှိပါ။
(၃) စီးပွါးရေးတက္ကသိုလ် သည် မနှစ်က မှ နှစ်၅၀ ပြည့်ပါသည်။
(၄) စီးပွါးရေးတက္ကသိုလ် တွင် ၁၉၉၂ အထိ တော့ ကွန်ပျူတာဌာန မရှိသေးပါ။
ကြည့်ရတာ ၁၉၇၄ နဲ့ ၁၉၄၇ မှားတယ် ထင်ပါတယ်။ စာရိုက် အမှားပေါ့။
ခုနှစ် တစ်ခု က နေ အချက်အလက်များစွာ ကို အမှားဖြစ်စေတာ ကို သိရက်နဲ့ ပေါ့သလား မသိ။
တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံ မှု အားနည်းလွန်းတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
Original English လို ဆောင်းပါး ကို ရှာတာလဲ မတွေ့ဘဲ အဲဒီ မြန်မာလိုဘဲ တွေ့တာ မို့ မူရင်း မှာ တော့ မသိ။
ဦးတင်ဝင်းအောင် တင် မဟုတ် ဦးသိန်းဦး အကြောင်းမှာလဲ တစ်လွဲ တွေချည်းဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကြုံတုန်းလေး ကလေး တွေ နဲ့ ပေါင်းပြီး သူကြီးမင်း ကို ဂျီ မှဘဲ။
အကယ်၍များ မြန်မာပြည် မှာ “ဟေး” လို့ ပျော်ပျော်ကြီး အော်နိုင်ခဲ့ရင်
ရွာထဲ မှာလဲ သူကြီးမင်း အနေ နဲ့ အထိမ်းအမှတ် တစ်ခု အမှတ်တရ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်လဲ ဆိုတာက တော့ သူကြီးမင်း သဘောပေါ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
alinsett says: -ဟေး ဆိုတာကို ပျော်ပျော်ကြီးပဲ အော်ချင်မိ—
-ကြောက်လန့်တကြား မောင်းထုတ်ရချိန်မှာ အော်တဲ့ ဟေးနဲ့
အရီးပြောသလို အမှတ်တရ တစ်ခုခု သဂျီး ကမကထ လုပ်သင့်ပါတယ်
Mike says: .ဂွတ်ဒ
alinsett says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1379
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သဂျီးသာ မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး သတင်းစာ တို့ ဘာတို့ ထုတ်မယ်ဆိုရင် သဂျီး ရှိသမျှ တက်တက်စင်ပြောင် သွားအောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းပေးပါမည်။
kai says: အားကိုးရပုံ..။